सल्यानका पुर्व जिल्ला वन अधिकृत विद्यानाथ झालाई प्रदेश २ का मन्त्रीले कुटपिट गरे
पुुस ३०, सल्यान ।
साविकको जिल्ला वन कार्यालय र हालको डिभिजन वन कार्यालय सल्यानका पुर्व जिल्ला वन अधिकृत विद्यानाथ झालाई प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले कुटपिट गरेका छन् ।
२०७१ असोज २३ गतेदेखि २०७३ कार्तिक १६ सम्म सल्यान जिल्लामा रहेर जिल्ला वन अधिकृतको रुपमा काम गरेका उनलाई आफूले भनेको योजना नपारिदिएको भन्दै प्रदेश मन्त्रीले कुटपीट गरेका हुन् । उद्योग वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव समेत रहेका झालाई कुटपिट गरेको घटना अहिले देशभरीे चर्चामा छ । मन्त्री नजिकको एक गैह्रसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई योजना नपारेको भन्दै मन्त्री यादवले कार्यकक्षमै बोलाएर आफूलाई कुटपिट गरेको सचिव झाको भनाइ छ ।
संघीय सरकारले सशर्त अनुदानअन्तर्गतको गरिबी निवारणका उद्यम कार्यक्रमका लागि आफ्नो एनजीओलाई छनौट नगरेको भन्दै मन्त्री यादवले आफूमाथि कुटपिट गरेको पीडित सचिव झाले बताए । मन्त्री यादवले सचिवमाथि हातपात गर्दा सभामुख सरोज यादव पनि मन्त्रीकै कार्यकक्षमा थिए । तर, मन्त्री यादवले भने उनीमाथि हातपात नगरेको दावी गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रीले कुटपिट गरेपछि उनलाइ आइतबार राति नै जनकपुरस्थित केयर नर्सिङ होममा उपचारको लागि भर्ना गरिएको थियो । सचिव झा उपचारपछि घर फर्केका छन्। सचिव झाले उपचार गराइरहेको केयर मेडिकल हलका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. अभिषेक रञ्जनले सचिवको दाहिने हातको औँला सुन्निएको तथा चड्कन हानिएको गालामा पनि मुखभित्र मासु सुन्निएको बताएका छन्। डा. रञ्जनका अनुसार रातिदेखि झाको रक्तचाप उच्च छ ।
झालाई कुटपीट गरेको घटना विषयमा छानबिन सुरु भएको छ । आइतबार घटना पश्चात् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्य टोलीले सोमबारबाट छानबिन सुरु गरेको हो । झालाई गत असोजमा प्रदेश २ को मन्त्रालयको सचिवका रुपमा खटाइएको थियो ।